Kedu ka m ga-esi mechie usoro SEO kasị mma maka ụlọ m?
Nyocha njirimara nke nchọta mpaghara bụ usoro nke ga-enwe maka obere ụlọ ahịa nke na-ere ahịa ha na mpaghara. Ị nwere ike ịdọta onye ahịa gị nwere ike ịmepụta ngwa ngwa site na ịmepụta akaụntụ Google My Business na ịtinye ozi niile achọrọ dịka adreesị anụ ahụ ụlọ ọrụ, nọmba ekwentị na e-mail n'ebe ahụ.
Google My Business bụ ngwá ọrụ na-enweghị ike ịnweta ebe niile na-enyere ndị ọrụ nta aka ịpụta na nchọta ọchụchọ maka mpaghara maka isiokwu dị iche iche maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Google wepụtara ngwá ọrụ a iji nyere obere ụlọ ọrụ aka ịmepụta weebụsaịtị n'enweghị ego. Ọ bụ ohere zuru oke maka ndị ahịa obodo dị ka ọtụtụ n'ime ha enweghị ike ịkwụ ụgwọ maka mmepe weebụsaịtị. Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-achọta ya dị mgbagwoju anya ma dị oke ọnụ iji chee ahịa ha n'Ịntanet - find me a lender. Dị ka data ndekọ data, ọ dịkarịa ala, pasent 60 nke obere ụlọ ọrụ ka enwebeghị weebụsaịtị. Ya mere, Google Business m bụ ụzọ zuru oke iji dọta ndị ọrụ n'enweghị ịmepụta weebụsaịtị. Ọ bụ ngwá ọrụ nweere onwe ya na onye na-eji ọrụ eme ihe nke na-adịghị achọ ihe ọmụma ọ bụla. Naanị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta ngalaba omenala dika ". com "ma ọ bụ". net, "ị ga-akwụ ụgwọ maka Google.
GMB bụ ngwá ọrụ dị mkpa nke na-enyere aka ịchọpụta ma gbanwee ụzọ ahia gị si egosi na eserese, Ihe Ọmụma Ihe Ọmụma, Google na nchịkwa sitere na ya. Dika akuko onodu ogugu, GMB bu ugbua mara amara nke oma nyocha ihe omumu.
Google My Business ngwá ọrụ SEO uru
Ị nwere ike melite Google My Business akaụntụ SEO site na-agbakwụnye ozi dị mkpa banyere azụmahịa gị na mpaghara yana adreesị nkịtị nke ụlọ ahịa gị, na-emeghe awa na NAP ndị ọzọ nkọwa. Ọzọkwa, ị nwere ike ijikwa azụmaahịa ndị ahịa gị hapụrụ. Ntụle anya dị mma nwere ike ịbụ ihe kachasị mkpa maka obere azụmahịa gị ka ọ na-enyere aka ịme mkpebi nzụta ha. Dịka Gash Dashboard na-enye ozi gbasara ụlọ ọrụ dị na Map na igbe Ọmụma, ọ dị ịrịba ama ịza ọnọdụ gị ma jupụta ozi niile dị mkpa.
Google My Business ngwá ọrụ nwere ike ịwelite ọnọdụ azụmahịa gị na ọchụchọ ntanetị dịka Google emeela ka visibilụ nke nsonaazụ ederede na ngwaọrụ mkpanaaka. Mgbe ị na-achọ nchoputa dị ka "ụlọ ahịa ụlọ ahịa kacha nso," Google ga-egosi gị na saịtị mbụ ya na mpaghara mpaghara nke ụlọ ahịa mals kacha nso dị na ọnọdụ gị ugbu a. Ọ pụtara na Google na-enye ohere azụmahịa dị ukwuu n'ahịa.
Enweghị akaụntụ Google My Business, ị nweghị ohere iji gosipụta na ndepụta mpaghara map ọ bụla dị na SERPs nke Google gosipụtara maka ọtụtụ ajụjụ dị n'ógbè. Ngwaọrụ a na-echebara ọtụtụ ihe iji chọpụta ọkwa maka azụmahịa. Ihe kachasị mkpa bụ mkpa nke ozi ahụ e nyere na njiri ajụjụ nke onye ọrụ, ebe dị anya nke ebe a gosipụtara na ọnọdụ onye ọrụ na ikike nke ebe a dabere na nzaghachi ndị ahịa.
Iji mee ka ezigbo akaụntụ GMB dị mma, ị ga-eburu n'uche na ihe niile ị na-enye kwesịrị ịdị na akara na ozi nhazi mbu gị. Ma ọ bụghị ya, ndị ọrụ gị nwere ike inwe nkụda mmụọ na mgbagwoju anya. Ezigbo data nwere ike imerụ gị na saịtị rankings ma bulie ibiaghachi ọnụego.
Ya mere, iji melite ndepụta GMB gị na usoro ndị a:
Họrọ otu ụdị ahịa azụmahịa;
Jụọ ndepụta gị na aha aha kwesịrị ekwesị ma dị mma;
Gosi ihe niile gbasara data gị;
Jiri ukpukpo okwu n'ime nkowa nkenke ebe o kwere omume ma buru ihe okike;
Gosi oge mmeghe ziri ezi;
Jiri naanị foto dị mma nke ụlọ ahịa gị nke kachasị kwekọọ n'eziokwu ahụ.